Adihevitra niarahana amin’ny KMF/Cnoe: ”Tokony hilamina tsy hisy hetraketraka ny fifidianana” | NewsMada
Adihevitra niarahana amin’ny KMF/Cnoe: ”Tokony hilamina tsy hisy hetraketraka ny fifidianana”
“Zotram-pifidianana mirindra sy milamina: Inona ny andraikitrao?” Izay ny lohahevitra nifantohan’ny adihevitra nokarakarain’ny KMF/Cnoe, Antananarivo, teny Faravohitra, omaly, ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasa Rindra hisian’ny fifidianana lavitry ny hetraketraka (Pev) vatsin’ny Vondrona eropeanina vola. Nandray anjara tamin’izany ny avy amin’ny rantsa-mangaikan’ny Ceni, ny fanjakana nahitana ny lehiben’ny distrika Antananarivo II, ny firaisamonina sivily, ary ny mpampahalala vaovao.
Tanjona amin’ny fifanakalozan-kevitra, izay atao isaky ny renivohi-paritany, ny fiaraha-mientan’ny rehetra ho amin’ny fifidianana lavitry ny hetraketraka. Andrasana amin’izany ny haha tomponandraikitra ny mpisehatra amin’ny fifidianana, mahafantatra ny anjara asany hisian’ny fifidianana lavitry ny hetraketraka. Eo koa ny hifandrindran’ny mpisehatra araka izay andraikitra tandrify azy avy hametrahana sy hanamafisana orina ny filaminana mandritra ny zotram-pifidianana.
Ilaina ny fanarahan-dalàna
Nambaran’ny avy amin’ny rantsa-mangaikan’ny Ceni, Antananarivo, Rasolondraibeny Alain, àry fa latsa-bato tsy misy teritery ny hoe fifidianana milamina sy mirindra. Manana andraikitra amin’izany ny mpifidy, ny solontenam-panjakana, ny mpitandro filaminana… Milamina sy mirindra izany rehefa hajaina lalàna sy ny safidin’ny vahoaka, raha ny fijerin’ny lehiben’ny distrika Antananarivo II, Raharimanganindriana Verohanitra.
“Mitondra ho amin’ny fitohizam-pitantanana ny fanjakana ho amin’ny fampandrosoana ny filaminana sy ny firindrann’ny fifidianana”, hoy ny avy amin’ny firaisamonina sivily, i Miadana Fabien. “Ny fiaraha-miasan’ny rehetra no hampilamina ny fifidianana”, hoy ny mpanao gazety Ramamonjisoa Rivo Alain.
Zava-dehibe ny firindrana sy ny filaminan’ny fifidianana, saingy matoa atao ny fifanakalozan-kevitra amin’ny alalan’ny atrikasa: tsy ilaozan’ny ahiahy na tsy fifampitokisana eo amin’ny samy mpisehatra? Ho hita eo, fa ny rehetra sy ny tsirairay no antony…